“ယုန်လေး” ရဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆိုတော် ”လင်းလင်း” ပြောတဲ့ အပေါ် ဒဲ့ ပြောလာ တဲ့” မြင့်မြတ်” – Let Pan Daily
“ယုန်လေး” ရဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆိုတော် ”လင်းလင်း” ပြောတဲ့ အပေါ် ဒဲ့ ပြောလာ တဲ့” မြင့်မြတ်”
ယုန်လေးရဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆိုတော်လင်းလင်း ပြောတဲ့အပေါ် ဒဲ့ပြောလာတဲ့ မြင့်မြတ် လက်တစ်လောလူမှူကွန်ယက်သတင်းများတွင် အလှုပ်ခတ်ဆုံးသတင်းဖြစ်သော အဆိုတော်၊ ဒါရိုက်တာ ယုန်လေး၏ (ငြိမ်းချမ်းသင့်ပြီ မြန်မာပြည်) သီချင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ သရုပ်ဆောင်မြ င့်မြတ်က အနုပညာသမား ဆိုသည်မှာ သူသန်ရာအနုပညာကို လွတ်လပ်စွာချပြ သည်မှာ အပစ်တင် မဝေဖန်သင့်ကြောင်း၊
ယခုပိုးစိုးပက်စက်ဝေဖန်ခံနေရသော အဆိုတော်ယုန်လေးမှာ မိမိ၏ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း မျာြး ဖစ်ပြီး လင်းလင်း က လူဖြစ်ရန်တစ်ရည်လို ဟုဝေဖန်အပုတ်ချသည့် အတွက် ယုန်လေး၏ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သော မိမိပါထိခိုက်နေကြောင်း မိမိတို့မှာ မည်သည့်အရည်မှမလိုကြော င်းနှင့်
နောင်မိမိရိုက်မည့် ရုပ်ရှင်ဗိဒီယိုဇာတ်ကား များတွင် သူ့(လင်းလင်း) သီချင်းများ လုံးဝထည့်သွင်း ရိုက်ကူးမည်မဟုပ်ကြောင်းနှင့် ဇာတ်လမ်းသဘောအရ လင်းလင်းသီချင်းပါလာပါကလည်း ထိုဇာတ်လမ်း ကို ဆက်ရိုက်ပေးမည် မဟုပ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။
နောင်မိမိရိုက်မည့် ရုပ်ရှင် ဗိဒီယိုဇာတ်ကား များတွင် သူ့(လင်းလင်း) သီချင်းများ လုံးဝ ထည့်သွင်း ရိုက်ကူးမည်မဟုပ်ကြောင်းနှင့် ဇာတ်လမ်းသဘောအရ လင်းလင်းသီချင်းပါလာပါကလည်း ထိုဇာတ်လမ်းကို ဆက်ရိုက်ပေးမည်မဟုပ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မင်းသားမြင့်မြတ်က “ကျီးကန်းလောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှတယ်” ဟု ဆိုထားပြီး ကိုအယ်ကြီး(ထူးအယ်လင်း) ဖြိုးမြတ်အောင်၊ မိုးမိုး စသူတို့လည်း သီးချင်းကောင်း၊သီချင်းခန့် များစွာ ရှိသည့် အတွက် လည်းတို့သီချင်းများသာ အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပြီး မိမိဇာတ်ကားများ အတွက် လင်းလင်း သီချင်း မလိုအပ်ကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။
အခုလိုအဆုံး ထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်… နောက်များမှာ လည်း အခု လိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေး သွားကြပါအုံးနော်….
Source:သတင်းထောက်…နန်းနြေ ခည်လင်းလက်အောင် (မိုင်ဆွန်ခ) သတင်းဂျာနယ်
“ယုနျလေး” ရဲ့ ကိစ်စ နဲ့ ပတျသတျပွီး အဆိုတျော ”လငျးလငျး” ပွောတဲ့ အပျေါ ဒဲ့ ပွောလာ တဲ့” မွငျ့မွတျ”
ယုနျလေးရဲ့ ကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး အဆိုတျောလငျးလငျး ပွောတဲ့အပျေါ ဒဲ့ပွောလာတဲ့ မွငျ့မွတျ လကျတဈလောလူမှူကှနျယကျသတငျးမြားတှငျ အလှုပျခတျဆုံးသတငျးဖွဈသော အဆိုတျော၊ ဒါရိုကျတာ ယုနျလေး၏ (ငွိမျးခမျြးသငျ့ပွီ မွနျမာပွညျ) သီခငျြးနှငျ့ ပါတျသကျ၍ သရုပျဆောငျမွ ငျ့မွတျက အနုပညာသမား ဆိုသညျမှာ သူသနျရာအနုပညာကို လှတျလပျစှာခပြွ သညျမှာ အပဈတငျ မဝဖေနျသငျ့ကွောငျး၊
ယခုပိုးစိုးပကျစကျဝဖေနျခံနရေသော အဆိုတျောယုနျလေးမှာ မိမိ၏ အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြး မြာွး ဖဈပွီး လငျးလငျး က လူဖွဈရနျတဈရညျလို ဟုဝဖေနျအပုတျခသြညျ့ အတှကျ ယုနျလေး၏ သူငယျခငျြးကောငျးဖွဈသော မိမိပါထိခိုကျနကွေောငျး မိမိတို့မှာ မညျသညျ့အရညျမှမလိုကွော ငျးနှငျ့
နောငျမိမိရိုကျမညျ့ ရုပျရှငျဗိဒီယိုဇာတျကား မြားတှငျ သူ့(လငျးလငျး) သီခငျြးမြား လုံးဝထညျ့သှငျး ရိုကျကူးမညျမဟုပျကွောငျးနှငျ့ ဇာတျလမျးသဘောအရ လငျးလငျးသီခငျြးပါလာပါကလညျး ထိုဇာတျလမျး ကို ဆကျရိုကျပေးမညျ မဟုပျကွောငျးပွောကွားထားပါတယျ။
နောငျမိမိရိုကျမညျ့ ရုပျရှငျ ဗိဒီယိုဇာတျကား မြားတှငျ သူ့(လငျးလငျး) သီခငျြးမြား လုံးဝ ထညျ့သှငျး ရိုကျကူးမညျမဟုပျကွောငျးနှငျ့ ဇာတျလမျးသဘောအရ လငျးလငျးသီခငျြးပါလာပါကလညျး ထိုဇာတျလမျးကို ဆကျရိုကျပေးမညျမဟုပျကွောငျးပွောကွားထားပါတယျ။ သရုပျဆောငျမငျးသားမွငျ့မွတျက “ကြီးကနျးလောကျတော့ ငှကျတိုငျးလှတယျ” ဟု ဆိုထားပွီး ကိုအယျကွီး(ထူးအယျလငျး) ဖွိုးမွတျအောငျ၊ မိုးမိုး စသူတို့လညျး သီးခငျြးကောငျး၊သီခငျြးခနျ့ မြားစှာ ရှိသညျ့ အတှကျ လညျးတို့သီခငျြးမြားသာ အသုံးပွုသှားမညျ ဖွဈပွီး မိမိဇာတျကားမြား အတှကျ လငျးလငျး သီခငျြး မလိုအပျကွောငျးပွောပွထားပါတယျ။
အခုလိုအဆုံး ထိဖတျရှုပေးတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျော တို့ Page မှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော… နောကျမြားမှာ လညျး အခု လိုဆယျလီတို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေး သှားကွပါအုံးနျော….
Source:သတငျးထောကျ…နနျးနွေ ခညျလငျးလကျအောငျ (မိုငျဆှနျခ) သတငျးဂြာနယျ
ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အပြတ်ဂေါ်နေပြီး စည်းချက် ကျကျလှုပ်ခါကာ ကနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ရှရေငျ အစုံ မို့မောကျနတေဲ့ ဝတျစုံလေး နဲ့ အကွမျးစား ပုံတှေ ခပြွလိုကျတဲ့ မျောဒယျ အယျလာ